Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0512 lah
Fahasahiana ao anatin'ny fahoriana (1Tes2:1,2)
Alahady 29 Jolay
Vakio miaraka amin’izay voalaza ao amin’ny Asa. 16 ny 1 Tes. 2:1,2. Ahoana no fomba ampifandraisan’i Paoly ny asany teo aloha tany Filipy sy ny asany tao Tesalônika?
Somary miverina kely amin’ireo lohahevitra hita ao amin’ny toko voalohany ny 1 Tesalônianina 2:1. Mamerina ao an-tsaina ilay fiteny nampiasaina tao amin’ny 1 Tes. 1:5 ny hoe “tahaka ny fantatrareo ihany”. Ny filazan’i Paoly ny hoe “fidirana” tao amin’ny fiangonana, dia mampahatsiahy ihany koa ny 1 Tes. 1:9. Hitantsika àry izany fa manohy ireo antondresaka efa natombony tao amin’ny toko voalohany amin’ny taratasiny ihany i Paoly. Miresaka ny amin’izay fantatry ny “rehetra” mikasika ny Tesalônianina ny fifaranan’ny toko teo aloha. Ato amin’ity toko manaraka ity kosa no iresahany izay zavatra fantatry ny mpamaky mikasika ny apôstôly sy ny fanoloran-tenany.
Ampahatsiahivin’i Paoly ny fampijaliana sy ny fanalam-baraka azy sy i Silasy tao Filipy noho ny fitoriana ny filazantsara. Ny isaky ny indray mandingana teny an-dalana ho any Tesalônika, dia nampahatsiahy azy tamin’ny fomba maharary tokoa izany fampahoriana izany. Tsy misy isalasalana fa hita soritra teny amin’izy ireo ny fangirifiriany, eny fa na dia efa tonga tao Tesalônika aza. Azon’ny apôstôly natao ny tsy nitory mivantana ny filazantsara teo amin’io toerana vaovao io. Raha izay zavatra vao nihatra taminy izay, iza moa no hanome tsiny azy amin’izany?
Nazoto sy nisokatra tamin’ny fahamarinana kosa anefa ny Tesalônianina. Raha ny fisainana maha-olombelona azy no nohenoin’i Paoly sy i Silasy, dia izao no ho reny: “Aza mitory ny filazantsara intsony.” Izao anefa no nolazain’Andriamanitra tamin’izy ireo tao anatin’ny fahoriany sy ny fangirifiriany indrindra, Sahia. Mahatanjaha. Koa dia “nanomboka sahy” (1 Tes. 2:2, dikan-tenin’ny mpanoratra) izy na dia azony antoka aza fa hisy fanenjehana hafa indray hitranga eo. Nisy fahasamihafana lehibe sy hita maso teo amin’ny toetra maha-olombelona azy (sy ireo fahalemena miaraka amin’izany) ary ny fahazoany hery avy tamin’Andriamanitra.
Nampiasain’Andriamanitra ho voninahitra ho Azy anefa ireo takaitra ivelany ireo tamin’ny farany. Ho an’ny Tesalônianina, ireo ratra hita maso ireo dia porofon-javatra anankiroa. Voalohany, avy tamin’ny faharesen-dahatra manokana tao aminy mihitsy ny filazantsara izay notoriny. Tsy nanao izany ho fahazoan-tombontsoa izy ireo (jereo ny 1 Tes. 2:3-6). Faharoa, nazava tamin’ny mpihaino azy fa nomba an’i Paoly sy i Silasy tamin’ny fomba mahatalanjona tokoa Andriamanitra. Tsy fampianarana ara-tsaina fotsiny ny filazantsara izay notorin’izy ireo fa narahin’ny fanatrehan’ny Tompo velona mihitsy, araka ny nahitana izany teo amin’ny fiainan’ny apôstôly (jereo ny and. 13).
Inona no heverinao ho porofo fa efa nanova ny fiainanao Andriamanitra? Ahoana no ahitan’ny hafa izany porofo izany? Sa tsy hita taratra velively izany?